ALTERNARIOSIS OF YAANYADA: SIDA LOO XALIYO DHIBIC QALLALAN ON CALEEMAHA - BEER CAGAARAN
Sharaxaadda iyo daaweynta Alternaria ee yaanyada
Dadka ku beerta khudradda beerahooda badanaaba waxay la kulmaan cuduro kala duwan. Tamaandho ma aha mid ka reeban waxayna saameyn kartaa fangaska Alternaria, taas oo keena cudur sida Alternaria.
Ka fikir maqaalkeena waxa ay tahay iyo sida loo daweeyo cudurkan.
Alternaria - cudur uu leeyahay magacyo kale: macrosporosis, dhibic brown, meel qallalan. Waa cudur halis ah oo cudurada caamka ah ee yaanyada.
Alternaria waxay ka timaadaa dhammaan xubnaha jidhka ee geedka, ka billowda hoose iyo ka dibna kor u kaco. On yaanyada sii kordhaya ee lagu koriyo, dhibco cad on caleemaha waxaa laga arki karaa inta badan. Goobo wareeg ah oo ku saabsan 7 mm dhexroor ayaa ka muuqda goobta dhaawaca. Later waxay la qaadaa oo ay gaari karaan 17 mm. Marxaladda soo socota, caleemuhu way u dhintaan marka meelaha ay saameeyeen ay isku duubmaan oo ay daboolaan badi caleen, iyo qoyaan badan waxay bilaabayaan inay ku daboolaan ubax madow.
Marka la eego dhibco mudo dheer, cudurku wuxuu muujinayaa laf-dhabarka, iyo dhibco ku yaal afkoda ayaa muuqda, daboolay lakabyo jilicsan oo leh ciriiri cad. Markaa kadib ayaa unugyada ay u dhintaan - afkoda iyo petioles oo qalalan, kadibna jabaan. On miraha qudhoodu waxay u muuqdaan meelo duurka ku dul dhuunta meel u dhow asliga ah, oo leh huur madow. Fungusku wuxuu awood u leeyahay inuu si qoto dheer u galo oo uu garaaco abuurka. Waxay mugdi iyo luminayaan biqilka. Tamaandho hoos u dhacaan, weli ma haystaan ​​wakhti ay u bislaadaan. Ama ka soo horjeeda, waxay u bislaadaan si aan caadi ahayn, laakiin isla markaa waxay leeyihiin tiro yar.
Sidee ayuu yaanyo kale duwanaan karaa, waxaad arki kartaa sawirka hoose.
Ma taqaanaa? Tamaandhada waxaa iska leh qoyska of nightshade waana qaraabo dhow ee baradhada iyo tubaakada.
Sababaha iyo cudurkan
Wakiilka keena ee Alternaria waa Alternaria solani Sorauer. Funguskaan wuxuu ku faafaa qulqulka hawada waxana uu si firfircoon u kobciyaa qoyaanka heerkulka 25-27 ° C.
Tixgeli waxa loo yaqaan alternative Alternaria. Waa wakiil ka mid ah fungus caag ah oo qaabeeya qaababka. Fangaskaan waxaa laga helaa oo keliya miraha bislaaday ee waxyeelloobay, barafoobay ama muddo dheer la keydiyay. Sababaha faddarada yaanyada:
xagaaga kulul, isbeddelka heerkulka maalintii iyo habeenkii oo saameeya horumarinta cudurka;
Roob badanaa waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta firfircoon ee fungus;
Waxyeelada farsamada waxay kor u qaadaa caabuqa;
ilkuhu waa fayruuska ama abuurka;
ciidda wasakheysan waxay sababa cudurro dalagga.
Waa muhiim! Ka hor inta beerto abuurka yaanyo, waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan loo xalliyo si looga fogaado cudurrada dhaqanka.
Noocyada joogtada ah waxaa ka mid ah:
Racfaanka Dahabka ah;
Baro sida loola tacaalo bedelka baradhada.
Astaamaha hore iyo khatarta
Calaamadaha ugu horreeya ee cudurka waxaa lagu arkay marxaladda beerashada geedo ee dhulka. Alternaria waxaa lagu muujiyaa qaabab yar oo yar oo ku yaal caleemaha hoose ee dhaqanka. Wakhtiga maskaxda ee wakiilka keena waa qiyaastii 3 maalmood. Ka dibna wuxuu bilaabaa inuu si firfircoon u koro oo u faafo. Cudurka waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay mid aad u halis ah, maaddaama uu si tartiib ah u saameynayo dhaqanka oo dhan, haddii aan la bilaabin daaweynta. Alternariosis waxay sababtaa dhimashada ilaa 85% wadarta yaanyada.
Ma taqaanaa? Boqortooyada Ruushka, yaanyo ayaa u muuqday qarnigii XVIII. Bilowgii hore waxaa lagu koray dhirta ornamental.
Daaweynta qashinka qalalan
Daaweynta maco-xanuunku waa daaweynta dhaqanka leh fungicides. Waxaa lagu talinayaa in lagu daweeyo geedka marka calaamadaha ugu horeeya ee cudurka uu muuqdo.
Ka feker waxa la sameeyo haddii dhibco cad ay ka muuqdaan caleemaha yaanyada. Fungicides ficil xiriir, sida Antracol 70 WG, Ditan M-45, waxay siisaa saameyn wanaagsan. Iyo sidoo kale daroogooyinka nidaamsan ee caawimaadda, sida "Flint", "Infinity", "Kvadris", "Ridomil Gold MC". Daaweynta waa in la sameeyaa 2 toddobaad kasta. Inta lagu jiro xilli waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo miraha 3-4 jeer.
Sidoo kale akhri sida looga takhaluso fusarium, xayrta maqaarka, kalluunka sare, phytophthora ku yaanyo yaanyada.
Waxaad ka hortagi kartaa soo ifbaxa Alternaria, haddii:
ka saar dhammaan haraaga dhirta ee ciidda ka dib goosashada;
samee Bacriminta macdanta oo ay ku jiraan potassium carrada;
Waqti si loo burburiyo dhirta cudurka qaba;
dooro noocyo u adkaysta cudurka;
waraabinta dalagga ee xididka, xidh xidh noocyo dheer, ka saar caleemaha hoose ee hoose;
fiiri wareegga dalagga.
Waa muhiim! Waa suurtogal in la beero yaanyada meel ay bataatada, eggplants, kaabajka, iyo basbaas koray ka hor.
Si looga hortago cudurka cudurka tamaandhada, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo dhaqanka diyaarinta nafleyda, sida Trichodermine, iyo Fitosporin, xitaa kahor bilawga bilowga Alternaria. Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka markaad beerto tamaandhada iyo u hoggaansama tallaabooyinka ka hortaga, markaa cudurada yaanyada ma aha kuwo cabsi badan.